Govecs GO! T3.4 – 🛵 လျှပ်စစ် Scooter 2020
အဆိုပါ GOVECS GO! T3.4 GOVECS ကနေပထမဦးဆုံးလျှပ်စစ်ကုန်တင် / ပို့ဆောင်မှုမော်တော်ဆိုင်ကယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ GO! T3.4 ထက်ပိုမို 80 km / h ၏ထိပ်တန်းမြန်နှုန်းရှိပါတယ်။ အဆိုပါ T3.4 ဆိုင်ကယ်အထူးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အသုံးပြုရန်နှင့် tradespersons အားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့် 50 170 မှလီတာကုန်တင်သေတ္တာများနှင့်အတူရရှိနိုင်ကြသည်။ ဒါဟာ (ယာဉ်မောင်းဖယ်ထုတ်ပြီး) 175 ကီလိုဂရမ်တစ်ကုန်တင်အလေးချိန်ကိုသယ်ဆောင်ဖို့စွမ်းရည်ရှိပါတယ်။
အဆိုပါ T3.4 အနေနဲ့အဆင့်မြင့် brushless မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်လျှပ်စစ်မော်တာစွမ်းအားဖြင့်နှင့်တစ်ဦးအနိမ့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုခါးပတ် drive ကိုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါလျှပ်စစ် Scooter ကတော့ Scooter နီးပါးမျှဆူညံသံထုတ်လုပ်ကြောင်းသေချာသည့်ခေတ်မီ drive ကိုရထားရှိပါတယ်။
အဆိုပါ Govecs GO! T3.4 ရှေ့နှင့်နောက်ထဲမှာဟိုက်ဒရောလစ် disc ကိုဘရိတ်နှင့်အတူပေးအပ်သည်။
အဆိုပါ Govecs GO! T3.4 တစ်ဦးရှိပါတယ် Kinetic Energy က Recovery ကိုစနစ် (KERS) ။ braking သောအခါ, လျှပ်စစ်မော်တာတစ်ဦးမိုးကြိုးဓါတ်လုပ်စက်နှင့်အာဏာဘက်ထရီမှပြန်လာသောဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ ဒီအရုပ်ပျို system ကိုစွမ်းအင်ချွေတာနှင့်အကွာအဝေးတိုးပွားစေပါသည်။ အဆိုပါ GO နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ! T2.4 အဆိုပါ GO ပါ! T3.4 လည်းဘေးထွက်ရပ်တည်ချက်မြင့်မားသောရောင်ခြည်များနှင့်လိုင်စင်ပန်းကန်အလင်းရောင်နှင့်အတူတပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။